Fahasamihafana eo amin'i Pepsin sy i Renin Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'i Pepsin sy i Renin Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / biokimia / fahasamihafana eo amin'i Pepsin sy i Renin
Fahasamihafana eo amin'i Pepsin sy i Renin
29 septambra 2019 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny pepsin sy renin dia ny pepsin, izay iray amin'ireo anzima fandevonan-kanina , dia protease iray nafenin'ny vavony raha ny renin kosa dia anzima ary koa hormonina novokarin'ny sela juxtaglomerular ny voa.
Ny proteinina dia anzima izay mandamina ny fatoran'ny peptide ary mamaky ny proteinina ho lasa peptide na asidra amine. Pepsin dia proteinina iray ao anaty ranom-bavony. Izy io dia iray amin'ireo anzima fandevonan-kanina indrindra izay manaparitaka ireo sakafo proteinina ho lasa peptides sy asidra amine. Mifanohitra amin'izany kosa, ny renin dia anzima sy protease aspartika. Io no anzima fandraisana an-tanana ny renin-angiotensin rafitra. Miasa hormonina i Renin ary manampy amin'ny fifehezana ny tosidra.
2. Inona ilay Pepsin
3. Inona i Renin
4. Ireo fitoviana misy eo amin'i Pepsin sy i Renin
5. Fampitahana mifanila - Pepsin vs Renin amin'ny endrika Tabular
Inona ilay Pepsin?
Pepsin dia anzima protease mahomby. Io no tena anzima misy ao amin'ny ranom-panafody. Nahita izany i Theodor Schwann tamin'ny 1836. Pepsin dia manana rafitra telo-habe. Izy io dia mampifangaro ny fatorana peptide eo anelanelan'ny asidra amine hidrophobika sy manitra toy ny phenylalanine, tryptophan, ary tyrosine, sns. Pepsin dia misy vondrona aspartika katalika ao amin'ny toerana misy azy. Pepsinogen dia endrika pepsin tsy miasa.
Sary 01: Pepsin
Ny vavony HCl dia mamadika pepsinogen ho lasa pepsin mavitrika. Eo ambanin'ny tontolo misy asidra ao amin'ny vavony, ny pepsin dia mamaky proteinina ho lasa peptides na asidra amine. Ny toetoetran'ny alikaola be sy ny mpanakana sasany toy ny pepstatin, sucralfate, sns. Dia afaka manakana tsara ny anzima pepsin.
Inona i Renin?
Renin dia zezika nafenin'ny sela manokana ao amin'ny voa. Izy io dia protease aspartika. Robert Tigerstedt sy Per Bergman vao nahita renin.
Sary 02: Renin
Izy io dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny tosidra amin'ny alàlan'ny fanaovana ho hormonina koa. Rehefa milatsaka ny tosidra dia tonga amin'ny renirano ny renin ary mitarika ny fivadihan'ny angiotensinogen ho angiotensin I. Ny anzima mpanova angiotensin dia mampivadika ny angiotensin I ho angiotensin II. Ny Angiotensin II dia manery ny lalan-drà hampiakatra ny tosidra. Ankoatr'izay, angiotensin II dia mandrisika ny fihary adrenal hamokatra aldosteron. Ny hormonina aldosteron dia mampitombo ny haavon'ny sira ao amin'ny rà, amin'izay hampiakatra ny tosidra.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'i Pepsin sy i Renin?
Pepsin sy renin dia proteinina roa.
Ankoatr'izay, samy protease aspartika izy roa
Inona ny fahasamihafana misy amin'i Pepsin sy Renin?
Pepsin sy renin dia proteinina manaparitaka proteinina ho molekiola tsotra. Pepsin no protease digestif lehibe ao amin'ny vavony. Mifanohitra amin'izany kosa, ny renin dia ny anzima fandraisana an-tanana ny rafitry ny renin-angiotensin izay manampy amin'ny fifehezana ny tosidra. Ka io no mahasamihafa indrindra ny pepsin sy renin. Ny vavony dia manafina ny pepsine raha ny sela juxtaglomerular an'ny voa kosa dia mamokatra renin. Ny fahasamihafana iray hafa misy amin'ny pepsin sy renin dia ny renin dia miasa toy ny hormonina izay manampy amin'ny fifehezana ny tosidra raha ny pepsin kosa dia tsy toy ny hormonina.
Ity sary eto ambany ity dia mamintina ny tsy fitovizan'ny pepsin sy renin.
Famintinana - Pepsin vs Renin
Pepsin no proteinina asidra lehibe ao amin'ny vavony. Mifanohitra amin'izany, ny renin dia ny anzima fandraisana an-tanana ny rafitra renin-angiotensin. Ny sela manokana ao amin'ny voa dia mamoaka renin ao anaty lalan-dra. Pepsin dia mamaky ny sakafo proteinina ho asidra amine raha ny renin kosa dia manampy amin'ny fifehezana ny tosidra amin'ny alàlan'ny fampidirana angiotensinogen ho angiotensin I. Noho izany, dia mamintina ny tsy fitovizan'ny pepsin sy renin.
1. Persson, Pontus B. “Renin: Fiandohana, tsiambaratelo ary syntetika.” The Journal of Physiology, Blackwell Science Inc, 1 Novambra 2003, Azo zahana eto .
2. “Pepsin.” Pepsin - topy topimaso | Lohahevitra momba ny siansa mivantana, misy eto .
1. "1PSO" Nosoratan'i DrKjaergaard. Asa manokana (miorina amin'ny fangatahana copyright) (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2. "PDB 2ren EBI" Nosoratan'i Jawahar Swaminathan sy ny mpiasa MSD ao amin'ny European Bioinformatics Institute (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny fihenan'ny solifara sy ny solifara Fahasamihafana eo amin'ny Phospholipids sy Sphingolipids Fahasamihafana eo amin'ny biotransformation sy ny metabolism Fahasamihafana eo amin'ny asidra salicylic sy asidra acetylsalicylic Fahasamihafana eo amin'ny proteinina G sy ny receptor Tyrosine Kinases
Fahasamihafana eo amin'ny nofy sy ny nofy ratsy
Fahasamihafana eo amin'ny menaka oliva sy menaka legioma
Fahasamihafana eo amin'ny Fibrin sy Slough
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Wavefront sy Wavelet